Otú nyefee Data si gam akporo na ekwentị iPhone (iPhone 6 gụnyere)
Otú nyefee Data si gam akporo ka iPhone (iPhone 6s Plus gụnyere)
Chọrọ ịgbanwee si gam akporo ka iPhone? Nke ahụ bụ n'ezie mma. Otú ọ dị, na m eche na o nwere ike na-echegbu onwe gị a otutu maka otú nyefee data si gam akporo ka iPhone. N'ezie, ị na-adịghị mkpa ka nchegbu banyere ịmafe si gam akporo ka iPhone mgbe niile. E nwere ụzọ ụfọdụ maka na ị nyefee ọdịnaya site Android ekwentị gị iPhone, na-eme ya n'ihi na ị na-akwaga gị niile dị mkpa data n'enweghị. Lelee dị ụzọ nyefee data si gam akporo ka iPhone n'okpuru na họrọ onye nke ahụ dị mma maka gị.
Cheta na: All ụzọ kwuru n'okpuru maka otú nyefee data si gam akporo ka iPhone dị ka fọrọ nke nta ọ bụla ọhụrụ gam akporo igwe na-agba ọsọ Android Lollipop na Marshmallow na iPhone na-agba ọsọ iOS 9, gụnyere iPhone 6s na iPhone 6s Plus. Ọ bụrụ na ị nwere ọhụrụ iPhone, na-eche free iji ụzọ nyefee data si gam akporo ekwentị gị iPhone 6s (Plus).
1. shortcut: Nyefee Data si gam akporo ka iPhone na 1 Pịa (120 mins, <10 mins)
2. Free Ụzọ Nyefee Android Data ka iPhone (120 mins)
2.1 Nyefee Ndi ana-akpo si gam akporo ka iPhone (10 mins)
2.2 mmekọrịta Notes, Email na kalenda si gam akporo ka iPhone (10 mins)
ma gụọ 2.3 Nyefee Music na Video si gam akporo ka iPhone (10 mins)
2.4 Get Android ngwa ọdịnala na iPhone (60 mins)
2.5 nyefee Photos si gam akporo na ekwentị iPhone (10 mins)
2.6 mmekọrịta Documents ka iPhone si akporo ekwentị (20 mins)
1. shortcut: ibufee ọdịnaya site na Android ka iPhone na 1 Pịa (<10 mins)
Na-ata ahụhụ dị ukwuu site na ngwa ngwa ọsọ nyefee Android data ka iPhone 6s (Plus) nta nke nta? Ị na-adịghị na ya. Ebe a bụ ike Android ka iPhone transfer ngwá ọrụ - Wondershare MobileTrans, nke na-enyere ị nyefee kọntaktị, foto, video, foto na music si gam akporo ka iPhone 6s (Plus) na 1 Pịa. Ke adianade do, ọ bụ nke mbụ software na ụwa na-akwado na-ebufe ozi site na Android ka iPhone 6s (Plus).
Ịmafe Android ka iPhone 6s (Plus) ike-adị mfe
Mfe nyefee kọntaktị site na Android ka iPhone 6s (Plus) na zuru na Ama kọntaktị.
Copy kalenda si gam akporo ka iPhone, n'agbanyeghị na ọ bụ na ebe nchekwa ekwentị ma ọ bụ ígwé ojii.
Nyefee niile video na music, na tọghata kedi ndị si Android ka iPhone 6s (Plus).
Nyefee ozi ederede site na Android ka iPhone 6s (Plus) ka mfe ederede ka ndị ọzọ.
Copy albums na foto site na Android ka iPhone 6s (Plus) foto Ọbá akwụkwọ, otú i nwere ike ihuchalu n'oge ọ bụla.
Kwado ka ịgbanwee si HTC, Samsung, Motorola na ndị ọzọ na-iPhone 6s (Plus) / 6 Plus / 5s / 5c / 5 / 4S / 4 / 3GS na-agba ọsọ iOS 9/8/7/6/5.
3 Nzọụkwụ nyefee Data si gam akporo ka iPhone 6s (Plus) na 1 Pịa
1.Contacts na akaụntụ: Wondershare MobileTrans ike ịnyefe kọntaktsị na Twitter, Facebook, Google na ihe ọ bụla na akaụntụ gị na-akwado Android ngwaọrụ. Ya mere, biko mee ka n'aka ma ị chọrọ nyefee kọntaktsị na ihe ndekọ ma ọ bụ. Ọ bụrụ na ee, biko banye na ihe ndekọ na gị android ngwaọrụ. 2. One-pịa na nkwado ma weghachite: Jiri a mode mgbe ị nwere otu ekwentị na aka. Dị nnọọ ndabere data na gị Android ekwentị na kọmputa, ma weghachi gị iPhone 6s (Plus) Mgbe ọ bụla ị chọrọ.
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị Android ka iPhone Data Nyefee Ngwá Ọrụ
Gbaa ndị Android ka iPhone data transfer ngwá ọrụ na kọmputa, na ị ga-ahụ window dị ka ndị a. Mgbe ahụ, jikọọ gị Android ekwentị na gị iPhone na kọmputa site na eriri cables karị. Jide n'aka na ma ngwaọrụ nwere ike ịga nke ọma achọpụtara site na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2. Họrọ ekwentị na ekwentị Nyefee atụmatụ
Ke isi window, ịhọrọ na ekwentị ekwentị Nyefee mode, ị ga-ahụ ihe omume ngosipụta dị ka ndị a. Ị nwere ike iji "tụgharịa" button ka ịgbanwee ebe gị igwe na-eme n'aka na iPhone bụ ebe otu.
Nzọụkwụ 3. Nyefee SMS, kọntaktsị, kalinda, Photos, Video na Music si gam akporo ka iPhone 6s (Plus)
Mgbe ahụ, ị pụrụ ịhụ na ihe nile ọdịnaya na ike ga-agafere na-depụtara na n'etiti window. Ego ndị chọrọ faịlụ na pịa Malite Copy. A obere dialog Pop elu, na-agwa unu pasent nke ọganihu mmanya. N'oge usoro, mgbe ịkwụpụ ma ngwaọrụ.
2. Free Ụzọ Nyefee Data si gam akporo ka iPhone
Iji nyefee Android kọntaktị na iPhone 6s (Plus), ị nwere ike ịzọpụta kọntaktị niile na Android SD kaadị, na bulite gị akaụntụ, dị ka Google, Yahoo !, iCloud, na mgbe ahụ mmekọrịta gị iPhone 6s (Plus). Na-esonụ akụkụ, ga-amasị m na-egosi gị otú ị na-eme ka ya site na Google akaụntụ.
Nzọụkwụ 1: On gị Android ekwentị, na-aga Ndi ana-akpo ngwa. Enweta bọtịnụ na ekpe nke n'ụlọ button na-egosi menu ndepụta. Enweta Import / Export.
Nzọụkwụ 2. Pịa Export ka USB Nchekwa> OK ịzọpụta kọntaktị na ndepụta gị SD kaadị. Jikọọ gị android ekwentị gị na kọmputa site na iji eriri USB na dị ka a disk. Mepee SD kaadị faịlụ mbupụ na vCard faịlụ gị na kọmputa.
Nzọụkwụ 3. y'otú Gmail webpage na kọmputa gị. Pịa Gmail> pịa Ndi ana-akpo na-egosi na kọntaktị akara panel. Pịa More> Bubata .... > Pịa Họrọ File iji họrọ vCard faịlụ i echekwa na nzọụkwụ 2 mbubata ya.
Nzọụkwụ 4. On gị iPhone, pịa Ntọala> Mail, Ndi ana-akpo, kalenda> Tinye Akaụntụ ...> Google. Abanye na na gị Gmial akaụntụ na enweta Next ịrụcha ntọlite. Tụgharịa na Ndi ana-akpo. Mgbe ahụ, kọntaktị ga-synced gị iPhone).
Gị Android ekwentị atụmatụ ndị ahụ Google mmekọrịta na-enwe syncing gị niile dị mkpa kalenda ka Google akaụntụ. Ukwu ahụ. Ị nwere ike mmekọrịta kalenda site Google ka iPhone 6s (Plus) mfe.
Soro mfe nzọụkwụ n'okpuru:
Nzọụkwụ 1. On gị Android ekwentị, pịa Ntọala. Pịgharịa gaa na ala na ihuenyo ịchọta Akaụntụ & mmekọrịta. Chọta gị Gmail akaụntụ na enweta mmekọrịta kalenda. Mgbe ahụ, enweta mmekọrịta Ugbu a imelite kalenda gị Gmail akaụntụ. Ndi ana-akpo nwekwara ike synced n'otu oge.
Nzọụkwụ 2. On gị iPhone 6s (Plus), mgbata Ntọala na-aga Mail, Ndi ana-akpo, kalenda na pịa Tinye Akaụntụ .... Họrọ Gmail na-abanye na gị Gmail akaụntụ Ama, dị ka aha, adreesị ozi, paswọọdụ. Enweta Next na-atụgharị na kalenda, Email na Cheta. Mgbe ahụ, syncing usoro amalite.
Ike na-eche na-ewetara music na video na gị Android ekwentị gaa na iPhone? Nsogbu adịghị. iTunes nwere ike ime na gị mfe.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị android ekwentị na kọmputa na-azọpụta music na vidiyo na ya na kọmputa. Wụnye iTunes na kọmputa. Agba ya ma na-gị iPhone ejikọrọ na eriri USB.
Nzọụkwụ 2. Na iTunes Ohere, pịa File> Tinye nchekwa Library .... Agagharị kọmputa gị ga-egwu na video na nchekwa ma nyefee video na music ka iTunes Library.
Nzọụkwụ 3. Pịa gị iPhone n'okpuru Ngwaọrụ na-iPhone akara panel. Pịa Music tab> mmekọrịta Music. Tinye akà rà gị chọrọ music ma ọ bụ listi ọkpụkpọ na pịa Mee.
Nzọụkwụ 4. Iji nyefee video si gam akporo ka iPhone, ị nwere ike pịa Movies, TV egosi ma ọ bụ ndị ọzọ video edemede. Mgbe ahụ, Tinye akà rà gị chọrọ videos na pịa Mee.
Ihe na-agba ọsọ Android ngwa ọdịnala na iPhone? Gị ụta, Android ngwa anaghị arụ ọrụ na iPhone (iOS 9 akwado). Otú ọ dị, ọtụtụ Android ngwa nwere iPhone nsụgharị ma ọ bụ edochi anya na-eme otu ihe ahụ. Ị pụrụ ịchọ ma na-dị otú ahụ ngwa site App Echekwala na iTunes mfe.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ụfọdụ ngwa kwesịrị ị ịmepụta otu akaụntụ maka ịkpọ ma ọ bụ na-echekwa gị data na ígwé ojii, ndị data ga-abịa na gị mgbe-akpụ akpụ na iPhone. Ma ọ bụ, data ga-efu mgbe wụnye ha na gị na iPhone 6s (Plus). N'ihi ya, mgbe ịmafe si gam akporo ka iPhone, ị nwere ike nweta ihe ị chọrọ si App Store ma ọ bụ chọọ na internet maka na-kasị mma free ngwa ọdịnala n'ihi iPhone 6 (Plus).
Ka a obere mgbagwoju anya? Mụta ihe esi ngwa ọdịnala na iPhone 6 (Plus) ebe a >>
2.5 Nyefee Photos si gam akporo ka iPhone (10 mins, Free Way)
Eleghị anya ị na-achọghị ka ida ọtụtụ narị puku ndị photos nke dee gị dị oké ọnụ ahịa na-echeta. Ebe a bụ ụzọ. Iji nyefee Android foto iPhone, ị nwere ike ise nkwado si iTunes.
Na mmalite, efego gị Android ekwentị na kọmputa dị ka a USB mbanye. Dọrọ na dobe gị niile chọrọ foto na a nchekwa na kọmputa gị. Jikọọ gị iPhone na kọmputa site ịkwụnye a eriri USB. Site na ịpị gị iPhone, ị ga-esi na-achịkwa panel. Gaa Foto na nne Mmetụta mmekọrịta Photos si na-ahụ foto nchekwa. Gaa na ala nri akuku na pịa Mee ka mmekọrịta foto site na Android ka iPhone.
2.6 mmekọrịta akwụkwọ iPhone si gam akporo (20 mins, Free Way)
Chọrọ na-ewetara gị akwụkwọ, dị ka Excel, PPT, PDF, TXT, DOC na ndị ọzọ gị iPhone 6s (Plus) n'ihi na ị na-elele na-aga? Iji mee ka ya, Dropbox bụ ezigbo onye inyeaka maka gị. Ọ na-ahapụ gị bulite gị chọrọ akwụkwọ ka ígwé ojii enweghị ihe ọ bụla hassle. Mgbe ahụ, ẹkedori Dropbox na gị iPhone 6s (Plus) ele ma ọ bụ dezie ọ bụla akwụkwọ ị chọrọ. Mụta ihe banyere Dropbox.
Ibufee ọdịnaya site na HTC ka iPhone
Bara uru Atụmatụ na-gị iPhone 6s (Plus) dị ka ihe ọma dị ka New
Olee otú ndabere Data ekpochi iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Best iPhone File Manager jikwaa iPhone faịlụ
Olee otú iji weghachi-ehichapụ Texts on iPhone
> Resource> iPhone> otú nyefee Data si gam akporo ka iPhone 6 / iPhone 6 Plus